अछाममा एमाले बिरुद्ध अनेक प्रचार गरे पनि फरक पर्दैन
साँफेबगरमा एमालेलाई हराउने कोही छैन
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ जेठ ३१ बुधबार |
अछाम, ३१ जेठ । वि.सं. २०२५ सालमा अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका ३ (साविकको सिद्धेश्वर गाविस) मा जन्मिएका कुलबहादुर कुँवर वि.सं. २०४७ सालदेखि नेकपा (एमाले)को राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । विद्यार्थी राजनीती हुँदै युवा संगठन र वि.सं. २०५० सालमा जिल्ला कमिटी अछामको सदस्य बनेका थिए ।
कुँवर हाल प्रदेश नम्बर ७ संगठन कमिटीको सदस्य रहेका कुँवरलाई एमालले साँफेबगर नगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) पदको उम्मेदवार बनाएको छ ।
नेकपा (एमाले) बाट यसअघि उम्मेदवार बनाइएका शिवबहादुर कुँवर (शिलोज) को उम्मेदवारी पछि एमालेले कुल बहादुरलाई अघि सारेको छ । एमालेका तर्फबाट अछाम साँफेबगर नगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार कुल बहादर कुँवरसंग गरीएकोे कुराकानीको सारसंक्षेपमा :
चुनावको मुखमा एमालेले साँफेबगरमा उम्मेदवार परिवर्तन गरेको छ । यसले चुनावमा फरक पर्दैन ?
‘एमालेका तर्फबाट यसअघिका उम्मेदवार शिवबहादुर कुँवरका बारेमा काठमाडौंंस्थित सहकारी संस्था, स्थानीय विद्यालय र बैंकमा अनियमितता गरेको सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि उनको उम्मेदवारी फिर्ता लिइएको हो।
सिद्धार्थ सहकारी, जनकल्याण मावि र बैंक कारोबारबारे केही साताअघि एउटा अनलाइनमा समाचार उनका बारेमा समाचार आएको थियो । यो समाचारले उनलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै असर नपर्ने भए पनि विपक्षीले भविष्यमा अडचन गर्नसक्ने भएकाले उनको उम्मेदवारी फिर्ता गरिएको हो ।
विपक्षी पार्टीहरूले एमालेका विरुद्ध अनेक खालका प्रचार गरिरहेका छन्, तर यसले अछाममा कुनै फरक पर्दैन । उनीबारे आएका समाचारहरू निराधार हुन् । अहिले निर्वाचनको समयमा कानुनी उपचार गर्ने समय नभएकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिइएको हो । हामी पछि कानूनी उपचार खोज्ने छौं । साँफेबगरमा एमालेलाई कसैले हराउन सक्दैन ।’
साँफेबगर नगरपालिकाको विकास लागि तपाईका चुनावी एजेन्डाहरू केके छन् ?
‘सभ्य, समृद्ध र सफा नगर हाम्रो परिकल्पना, पुरा हुनेछन् जनताका र युवाका चाहना’ भन्ने नारासहित जनतामा गइरहेका छौं । साँफेबगर नगरपालिकाको समग्र विकाससंगै यहाँको समस्या समाधानको लागि मैले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको छु । सुन्दर तथा विकासको मुलप्रवाहमा भिजन हामीसंग मात्रै छ ।
साँफे नगरपालिकाका सवै वडामा सडक सञ्जालले छोएको छ, तर सडकहरू स्तरोन्नती हुनसकेको छैन । म प्रमुखमा निर्वा्चित भएपछि सवै टोलमा सडकको पहुँचदेखि सडकहरूमा ग्राभेल हुँदै कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएका छौ ।
साँफेबगरसंगै भएर बग्ने बुढीगंगा नदीमा विद्युतक उत्पादनसँगै अछामलाई नै झिलिमिलि बनाउने योजना छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सेती लोकमार्गलाई चाडोभन्दा चाडो सम्पन्न गर्नेका लागि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म दबावको दिनेछु । त्यस्तै, विद्यालय निर्माण गर्दा टिनको संरचना हुँदै आएकोमा पक्कि भवन बनाउन पहल गरिनेछ ।
विद्यालयको अनुपातमा विद्यार्थी नहुने, विद्यालयको तलब खुवाउन नक्कली उपभोक्ता समिति बनाउने कार्य हुने गरेको छ । यो समस्यासंगै शिक्षकहरूबीच देखिएको विभेद अन्त्यका लागि पहल गर्नेछु । कृषि, पशु व्यावसायको आधुनिकिरणमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । युवाहरूका लागि जिल्लामा रोजगारीका सम्भावनाको खोजि गर्ने मेरो योजना छ ।
महिला, युवा, दलित, आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका पक्षमा काम गर्नेछु । खप्तड, वैद्यनाथ र रामारोशन क्षेत्रलाई पर्यटनसंग जोड्न पहल गर्नेछु । ती क्षेत्रसम्म जाने बाटोको स्तरोन्नती गर्दै पर्यटकको आवागमन गराउनेछु । खप्तडमा केवुलकारको सञ्चालनसंगै होमस्टे सञ्चालनको लागि पहल गर्ने योजना छ ।
अछाममा सुविधासम्पन्न होटलहरू खोल्नको लागि पहल गर्नेछु । यस्तै बन्द अवस्थामा रहेको साँफेबगर एयरपोर्ट सुचारु गरिनेछ ।अहिले १२ करोड रुपैयाँको लागतमा साँफेबगर एयरपोर्ट पिच हुने क्रममा छ ।अछाममा चाडै हवाई उडान सुचारु गर्नेछु । वयलपाटा अस्पतालको स्तरोन्नती गर्दै मेडिकल कलेज निर्माणको लागि पहल गर्नेछु । त्यस्तै, खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि पनि पहल गर्ने योजना छ ।’
साँफेबगरलाई मेगासिटीका रूपमा विकास गर्न के पहल गर्नुहुन्छ ?
‘देशका १० शहरमध्ये साँफेबगरलाई पनि नयाँ शहरका रूपमा समावेश गरिएको छ । अहिले हामीले बनाएको गुरुयोजनामा मेगासिटीमा हुने आधारभूत भौतिक पूर्वाधारदेखि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका विषयवस्तुलाई समेटेका छौं । अहिले साँफेबगरमा ढल निकासदेखि खानेपानीको व्यवस्था, नयाँ बसपार्क निर्माणको लागि पहल भइरहेको छ ।’
सेवाग्राहीहरूको सेवासुविधाका लागि के योजना बनाउनु भएको छ ?
‘प्रत्येक वडामा नियमित अनुगमन समिति बनाइने छ । अनुगमन समितिहरूले पनि बदमासी गरिएको पाइएमा जनताले सिधैं प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई सम्पर्क गर्नको लागि हटलाइनको व्यवस्था गरिनेछ । प्रमुख तथा उमप्रमुखलाई वडा अध्यक्षले सञ्चालन गर्ने कामका बारेमा उल्लेख गरेर जनतालाई जानकारी दिनेछु ।’
चुनाव जित्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
‘एमाले राष्ट्रियताको अडान र एमालेले अछाममा गरेका विकासका कामहरू जनताले बिर्सेका छैनन् । २०७० सालको निर्वाचनमा दुवै क्षेत्रमा एमालले जितेको हो । पहिलो चरणमा एमालेप्रतिको जनलहरले एमाले चुनाव हार्दैन । यहाँका जनता मलाई जिताउन चुनावको मिति कुरेर बसेका छन् । एमालेको विकासवादी सोच
जनताले वुझेका कारण म चुनाव हार्छु भन्नेमा कुनै शंका छैन । एमालेसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने दल साँफेबगरमा छैनन् ।’
‘हामी जे बोल्छौं त्यही गर्छौ । हामीलाई सम्पूर्ण जनताले मतदान गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिएका छौं । हामी जितेपछि यहाँ समानुपातिक ढंगले विकासलाई अघि बढाउनेछौं । यस क्षेत्रको समृद्धिको योजना नेकपा एमालेसंगै मात्रै रहेकाले भोट हालेर जिताउन आग्रह गर्छौ । तपाईको भोट हाम्रो लागि अमूल्य सम्पत्ती भएकाले खेर जान दिँदैनौ ।’
संविधानविपरित प्रतिपक्षलाई जिस्क्याएर प्रतिपक्षविहिन भन्दै हिँड्ने ?
आगामी महाधिवेशनमा कोइराला परिवारबाट नेतृत्व दावी हुन्छ : सुजाता कोइराला, केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
राजकुमार ह्यारी र मार्कलको विवाह सम्पन्न,' विश्वभरका ६०० विशिष्ट पाहुना'
विमतिका कुरा छोडौँ, विवाद विल्कुलै आउँदैन : महासचिव पौडेल
कांग्रेसको नेतृत्व कमजोर हुँदा कम्युनिष्टलाई फाइदा !
हिजोदेखि संयुक्त सरकार रहेन ,अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकल सरकार :विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
माओवाद र जबज रहँदैन, अब माक्र्सवाद लेलिनवाद :पम्फा भुसाल
प्रचण्ड अहिले किङ मेकर ! 'आलोचना र आत्मालोचना भइरहन्छ'
एकता अनिवार्य छ, सम्मानजनक कार्यविभाजन गरौँ : नेता शर्मा
पहाडमा केपी ओली र तराईमा लालबाबु राउतले नाटक गरे : नेता यादव
कांग्रेसका यी नेता बल्ल होले मुख ! ‘नेपालीले पाएको कष्टका विषयमा मोदीले दुःख व्यक्त गरेको भए हुन्थ्यो’